The 25 Best (Free) iPhone Apps | U.N.O.B
Smart Phone ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုက အဲဒီလို (Extended Functionalities) အဆုံးမရှိတဲ့ Idea အသစ်တွေ တိုးချင်သလောက် တိုးလာနိုင်အောင် ပို အသုံးတည့်လာအောင် ကြိုးစားလုပ်ထားကြတာ၊ APPS တွေ ဘာမှ ထပ်မတိုး၊ အသုံးမချတတ်ရင် သာမာန်ရိုးရိုး ဖုန်းနဲ့ ဘာထူးတော့မှာလဲ။ ဘာလို့ ငွေ ပိုပေးနေမှာလဲ။
တစ်ချို့ကြတော့လဲ Apps တွေ Download လုပ်ရင် ငွေတွေ တအား ထပ်တောင်းနေမှာပဲ လို့ တွေးပြီး ဘာမှ ထပ် မကလိ တော့တာလဲ ပါမှာပေါ့။ တကယ်တမ်းတော့ Apple ရဲ့ App Store မှာ Free App တွေ အများကြီးပါ။ ငွေပေးရတဲ့ App အများစုကလဲ $1 လောက်ပဲ ပေးရပါတယ်။
Apple ကနေရောင်းတဲ့ App တွေက iPhone နဲ့ iPad ပေါ်မှာရှိတဲ့ App Store ကနေ တစ်ဆင့်ပဲ Download လုပ်လို့ ရပါတယ်။ Computer ပေါ်ကဆိုရင်တော့ iTune ကနေတစ်ဆင့် Download လုပ်ရပါတယ်။ ပြီးမှ USB နဲ့ ဖုန်းကိုသွယ်ပြီး Sync လုပ်ရပါတယ်။ အဲဒီ အလေ့အကျင့်လုပ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ Computer နဲ့ သွယ်လိုက်တိုင်း iTune က အလိုအလျောက် (Back-Up) ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းထဲက DATA, Contacts, Music နဲ့ Apps တွေ အကုန် သိမ်းပေးပါတယ်။ ဖုန်းပျောက်သွားတာ၊ ပျက်သွားတာ ရှိခဲ့ရင် iPhone အသစ်ထဲ ပြန်ပြောင်းထည့်လို့ ရတာပေါ့။
အခု ကျွန်တော် ဒီစာရေးနေတဲ့ အချိန်မှာ APPLE ရဲ့ APP STORE မှာ App ပေါင်း ၅ သိန်းကျော် ရှိနေပါပြီ။ အဲဒီထဲမှာ ဘယ်ဟာက ကောင်းပြီး ဘယ်ဟာက မကောင်းဘူးလဲ၊ ဘယ်ဟာက အသုံးတည့်လဲ ထိုင်ရွေးရင် နှစ်ချီပြီး ကြာသွားနိုင် ပါတယ်။ ကျွန်တော် သုံးဖူးခဲ့တာတွေ ထဲက ရှိထားသင့်တယ်လို့ ယူဆတဲ့ Free Apps ၂၅ ခုကို ရွေးပေးချင်ပါတယ်။
1. Myanmar Browser Lite
Online ပေါ်မှာ ဗမာစာဖတ်ချင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ တွေ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ Browser တစ်ခုပါ။ ဒီ Lite Version က အလကားဖြစ်ပြီး 99 cent ပေးရင် စာရေးလို့ရတဲ့ Keyboard Function ပိုလာပါတယ်။
iPhone Safari ထက် ကျွန်တော် ပိုကြိုက်ပါတယ်။ Mode, Private Browsing, Multi-Gesture အကုန် ပါဝင်ပါတယ်။ Push Menu Layout ကလဲ အများကြီး အသုံးကျပါတယ်။ Bookmark လုပ်ရ တာလဲ လွယ်ကူပါတယ်။
iPhone ၀ယ်ပြီ ဆိုကတည်းက ဒီဟာကို မရမက ရှာကြတော့မယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ မတွေ့ရင် လူတကာကို အသည်းအသန် မေးတော့မှာ၊ ဒီအတွက် ထပ်ရှင်းပြနေဖို့ မလိုတော့ဘူး ထင်ပါတယ်။
G-Talk, Google Video, Voice, Chat အားလုံး သုံးလို့ရပါတယ်။ Account အများကြီးရှိလဲ တစ်ပြိုင်နက်ထဲ သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဒီ Vtok မတိုင်ခင်က ကျွန်တော် Talkatone ဆိုတာ သုံးပါတယ်။ Talkatone က ပိုပြီး Stable ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် အတွက်တော့ မရှိမဖြစ်ပါ။ မြန်မာပြည်ကို ရောက်လေရာ အရပ်ကနေ လှမ်းခေါ်လို့ လွယ်တဲ့ အတွက်ပါ။ Connection မြန်တဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ပြောရင် Video/Sound Quality က အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဒီ App ကလေး ရောက်လာတာ သိပ်မကြာသေးဘူး။ အရင် ဒီလိုကောင်းတဲ့ဟာ ဆိုရင် ငွေပေးရတယ်။ iOS5တော့ အနည်းဆုံး လိုအပ်တယ်။ Text Message များများ သုံးတဲ့ သူတွေ သဘောကျမှာပါ။
ဒီလိုမျိုး Note မှတ်တဲ့ APP အမျိုးအစားထဲမှာ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ APP မတွေ့သေးပါဘူး။ ဓါတ်ပုံတွေ၊ အသံတွေ မှတ်ချင်တာမှတ်၊ ရှာချင်တာရှာ၊ ပြီးရင် Save လုပ်ထားတာကို ကိုယ့် PC, iPad, iPhone အကုန်လုံးကို Account တစ်ခုဖွင့်ပြီး Sync လုပ်လို့ ရပါတယ်။
Free Cloud Service (Online Storage) ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးများမယ့် Doc, Pictures, Files တွေ သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် Connection ရှိတဲ့ နေရာကနေ လိုသလို ပြန်ယူ အသုံးချလို့ရပါတယ်။ Password ကောင်းကောင်း လုပ်ထားဖို့တော့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
Photo Editor ပါ။ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး effect ထည့်ချင်တာ ပြင်ချင်တာတွေ အားလုံး လုပ်လို့ ရပါတယ်။ Adobe Photoshop Express App လည်း ရှိထားရင် ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော် Game ကစားခဲပါတယ်။ အလကား အချိန်ကုန်တယ် ထင်လို့ပါ။ Angry Birds လူပြော များလွန်းလို့ ကစားကြည့်လိုက်တာ battery ကုန်မှ ရပ်သွားပါတယ်။ iOS နိမ့်တဲ့ စက်တွေမှာ Lite version ကို သုံးပါ။
နောက်တစ်ခု၊ သူ့ Slogan ကိုက “Once you slice it, you can’t stop”. အဲဒါ အမှန်ပါပဲ။ Free Version မှာ ကြော်ငြာတွေ ၀င် ၀င်ရှုပ်တာတော့ စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။
ဒါကတော့ ဘော်ဒါတွေ အကြိုက်ပါပဲ။ iPhone ပထမဆုံး စ သုံးခါစက ပထမဆုံး Download လုပ် ကစားခဲ့တဲ့ App ပါ။
Online Directory အဖြစ် အစ ကတည်းက နာမည်ကြီးပါတယ်။ Mobile Version က အရမ်း ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နေရာ ပတ်ဝန်းကျင် စားသောက်ဆိုင်၊ ဓါတ်ဆီဆိုင်၊ ဟိုတယ် စတာတွေကို ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ တကွ အကုန် အလွယ်တကူ ရှာပေးနိုင်သလို Customer rating တွေလဲ ဖေါ်ပြပေးပါတယ်။ အကွာအဝေး၊ ဖုန်းနံပတ် အကုန်ပြည့်စုံအောင် လုပ်ထားပါတယ်။
ဒါကတော့ တော်တော်များများ သိထားကြပြီးသားပါ။ (Online Video Rental) Netflix account ရှိတဲ့ သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ အထူးသတိထားရမှာက ကိုယ့်ရဲ့ Data Plan က နည်းတယ် ဆိုရင်တော့ ယောင်လို့တောင် မထိမိပါစေနဲ့။ Wi-Fi နဲ့ သုံးရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။
15. Slacker radio
Free Account တစ်ခုဖွင့်ပြီး မိမိစိတ်ကြိုက် Radio Station တစ်ခု လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Rock သီချင်းတွေ သီးသန့်လား၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အဆိုတော်တွေချည်းလား၊ Mix လား၊ Random လား၊ High Quality Streaming Service တစ်ခုပါ။ Pandora App လည်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Slacker က ကြော်ငြာပိုနည်းပါတယ်။ ဒီ App ကို ရပြီးကတည်းက ကားမောင်းရင်း ရိုးရိုး Radio နားမထောင် ဖြစ်တော့ပါဘူး။ FM or Bluetooth Transmitter တစ်ခုဝယ်ပြီး ကားထဲမှာ သုံးလို့ ရပါတယ်။
16. red Laser
Bar Code, QR Code အကုန်ဖတ်ပါတယ်။ ဈေးနှုံးတွေ ရှာပေးတယ်။ ဘယ်မှာ ရနိုင်လဲ ရှာပေးတယ်။ အသုံးအရမ်း တည့်ပါတယ်။ ဥပမာ BestBuy ထဲမှာ ပစ္စည်းဝယ်ရင် ၀ယ်ချင်တဲ့ ပစ္စည်းကို Scan လုပ်ပြီး အသက်သာဆုံး နေရာကိုရှာပါ။ ပြီးရင် Saleman ကို ပြလိုက်ပါ။ Price Match လုပ် ပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး လုပ်ဖူးတဲ့ သူဆီက ကြားတာပါ။ pretty good. huh!
17. Navigator X
Android သမားတွေ ကတော့ ဒီတစ်ခု သာတယ်။ အဲဒီမှာ Perfect Navigation System ပါပြီးသား။ iPhone ကတော့ မြေပုံပဲ ပါတယ်။ Navigator တွေက ငွေပေးဝယ်မှ ရတယ်။ ဒီ Navigator X ကတော့ လောလောဆယ် free ပါ။ သိပ် အကောင်းချည်းတော့ မဟုတ်ဘူး။ $2 ပေးဝယ်ရင်တော့ Motion X လို့ ခေါ်တဲ့ App က ကောင်းပါတယ်။ အရင် Skobbler အလကားရလို့ သုံးဖူးပါတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု အလကား မရတော့ပါဘူး။
မရှိမဖြစ် Utility Tool ဖြစ်ပါတယ်။ အပူချိန်၊ အလေးချိန်၊ အကွာအဝေး၊ ငွေကြေး လဲလှယ်နှုံး အကုန် ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ App Design က သန့်ပါတယ်။ အကြံပေးရရင် 99 cent ပေးပြီး AppBox Pro ဆိုတာ ၀ယ်သုံးကြည့်ပါ။ အဲဒါကတော့ All-in-one Utility ပါ။ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်။
19. Airport Utility
ဒါကတော့ Intermediate user တွေ အတွက်ပါ။ တအား အသုံးဝင်ပါတယ်။ အိမ်က၊ ရုံးက Wi-Fi Network ကို စီမံခန့်ခွဲချင်ရင် ဒီ Utility က မရှိမဖြစ်ပါ။ သူ့ရဲ့ Graphic Interface က ပိုမို လွယ်ကူ စေပါတယ်။
ဒီ APP ကတော့ Top Ten App ထဲမှာ ထည့်ထားသင့်ပါတယ်။ ကြားတဲ့ သီချင်း ဘယ်သူ ဆိုတာလည်း၊ သီချင်း နာမည် ဘာလဲ၊ စာသားက ဘယ်လိုလဲ သိချင်ရင် ဒီ APP ဖွင့်ပြီး သီချင်းသံနား ၁၀ စက္ကန့်လောက် ကပ်လိုက်ပါ။ အတိအကျ သိရပါလိမ့်မယ်။ Youtube Link လဲ ပေးပါလိမ့်မယ်။ Android မှာဆိုရင် Download လုပ်ဖို့ Link တောင် ရှာပေးပါတယ်။
21. Wikipedia Mobile
ဒီ ဟာကတော့ အထူးပြောနေစရာတော့ မရှိပါဘူး၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အတွက် မရှိ မဖြစ်ပေါ့။ သာမာန် User တွေ အတွက် လည်း အများကြီး အသုံးတည့်ပါတယ်။
Recipe App တစ်ခု၊ ဒါကတော့ ကျွန်တော်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး၊ ပတ်ဝန်ကျင်က ဟင်းချက် ၀ါသနာ ပါသူတွေ ပြောကြလွန်းလို့ပါ။ ကိုရီးယား အစားအစာ ချက်ကြည့်ချင်ရင်တော့ YummyCook Recipes မှာ ကြည့်ပါ။
23. Web MD
ရုတ်တရက် ဆိုရင် ကိုယ့် အတွက် အသုံးမ၀င်သလို ရှိပေမယ့် အရေးကြုံလာရင် ဘယ်လောက် အသုံးတည့် သလဲဆိုတာ Download လုပ်တားတဲ့ သူတွေက အာမခံပေးပါလိမ့်မယ်။ ရောဂါ အသေးအမွှား၊ အခြေအနေ၊ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်၊ အရေးပေါ် အသက် ကယ်နည်း အများကြီး တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒေါကိတာ ရမ်းကုတွေ ရန်ကလဲ ရှောင်ဖို့ Idea ရနိုင်ပါတယ်။
24. BBC News
News App တွေ ထဲမှာ BBC News က တော်တော် ကောင်းပါတယ်။ Asia ဖက်က သတင်းတွေ ပိုစုံပါတယ်။ အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူပြီး ရှင်းပါတယ်။ Flash နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ Soccer Video တွေတော့ iPhone နဲ့ ကြည့်လို့ မရတာ တော်တော် စိတ်ညစ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါကလဲ BBC အပြစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Apple ရဲ့ Adobe Flash ကို ပိတ်ပင်ထားတဲ့ ခေါင်းမာ မှုကြောင့်ပါ။
25. ESPN Score Center
ဒါကတော့ Sport ကြိုက်တဲ့ သူတွေ အတွက် ရှိကို ရှိမှ ဖြစ်မယ့် APP ပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက Score Result တွေ Live တိုက်ရိုက် သိနိုင်ပါတယ်။ Highlight Video တွေလဲ အများကြီးပါ။ Design လုပ်ထားတာ ကောင်းပြီး Loading လဲ မြန်ပါတယ်။
အခုလောက်ဆို အသုံးတည့်မယ့် APP တစ်ချို့ ရှိပြီဆိုတော့ iPhone က ပိုပြီး အသုံးတည့်လာမှာပါ၊ ကျန်တာတွေကတော့ ကိုယ် ၀ါသနာပါရာ၊ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ သင့်တော်တဲ့ APP တွေ ရှာပြီး Download လုပ်ကြည့်ပါ။ တစ်ချို့ APP တွေဆို အံ့သြဖို့ ကောင်းလောက်အောင် ဆန်းကြယ်ပါတယ်။ ခေတ်ရှေ့ပြေးနေတဲ့ APP တွေလဲ အများကြီးပါ။
တစ်ကယ်တမ်း Android Phone တွေလောက်တော့ Features တွေ မစုံတာ အမှန်ပါပဲ။ Flash ကြည့်လို့ မရတာတွေ၊ သီချင်းတွေ၊ ဗွီဒီယိုတွေ Bluetooth ကတစ်ဆင့် ပြန် Share လုပ်လို့ မရတာတွေ၊ Lock Screen, Wallpapers, Icons တွေကို စိတ်ကြိုက် လုပ်လို့မရသေးတာတွေ၊ Download အလွယ်တကူ လုပ်လို့ မရတာတွေ၊ APP Download လုပ်ဖို့ Source ကို အခြား ရွေးချယ်စရာ မရှိတာတွေ ၊ တစ်ခြားဟာတွေ အများကြီးပါ။ ဒါတွေ အားလုံးဟာ Apple က သူ့ Quality ထိမ်းချင်တာရယ်၊ Security issue ရယ်၊ ရေရှည် ဈေးကွက် လက်ဝါးကြီး အုပ်ချင်တာတွေရယ် ကြောင့် ကန့်သတ်ထားတာပါ။ ပေးဝယ်နေတဲ့ သူတွေကလည်း ကျေကျေနပ်နပ် ပေးဝယ်နေတော့ အားလုံး OK နေတာပါပဲ။ iPhone ကို Jailbreak လုပ်နိုင်ရင်တော့ တစ်ချို့ Apple က ပိတ်ထားတာတွေ သုံးလို့ရပါတယ်။
Than Naing January 20, 2012 at 5:33 pm Reply
Thanks. You are very kind to Burmese Community. You may writeaThesis toaUniversity (May Be People and Applications) base in supporting people daily life with essential technology knowledge. Many thanks again.